Waligaa ha u oggolaan in guusha ay madaxaaga gaadho weligaa oo ha u oggolaan in guuldaradu wadnahaaga gaadho. - Siad K. Abdelnour - xigasho Pedia
ZSiad K. Abdelnour
Waligaa ha u oggolaan in guusha ay madaxaaga gaadho weligaa oo ha u oggolaan in guuldaradu wadnahaaga gaadho. - Siad K. Abdelnour
Noloshu waxay la timid kor u kac iyo hoos u dhac. Kulligeen waxaan leenahay safarro u gaar ah oo nagu taga safarada kala duwan. In kasta oo nolosheenu ay kala duwan tahay, haddana waxaa jira mabaadi 'hoosaadyo asaasi ah oo dhammaantood innaga khuseeya. Dhamaanteen waxaan gaar gaar gaar ah ku gaarnaa guul dhammaanteenna dhammaanteen waxaan la kulannaa dhicitaanno sidoo kale.
In kasta oo heerka cabirkeenna uu kala duwan yahay, haddana dhammaanteen waxaan dareemeynaa farxad markii aan guuleysanno iyo murugo markaan guul darrayno. Caadi ahaan waa caadi in la dareemo caadifadahaan laakiin waxa muhiim noo ah in aan fahamno waa illaa xadka aan u oggolaanno shucuurtaas inay na saameeyaan.
Markii aan guuleysanno, waxaan isku kalsoon nahay nafteena, laakiin badanaaba waxaan lumineynaa is-hoosaysiinta. Waxaan dareemi karnaa inaan ka sarreynno dadka kale oo dhan, iyo kuwa kale oo inaga horeeya. Habdhaqanada noocan oo kale ah runtii waxay dhaawaceysaa shaqsigeenna waxaanna lumineynaa xushmeyntii hawsha.
Markii aan guuleysanno, waa inaan ilaalino is-hoosaysiinta oo aan uga mahadnaqno dhammaan kuwa naga caawiyay inaan gaarno halka aan joogno. Waa inaan ku mahadnaqno inaan noqon karno halka aan maanta joogno. Waqtiga aan u oggolaanayno guulahayadu inay gaaraan madaxdeena, hoos u dhackeenu wuxuu bilaabmayaa.
Waxaan dareemaynaa inaysan wax na taaban karin, oo hoos u dhigno ilaaladeena. Uma shaqeyso sidii adag oo ay ugu wacan tahay isla weynaanta iyo dayacahan awgeed; Mid ayaa u muuqda inuu luminayo wixii ay ku guuleysteen.
Sidoo kale, marka guul darrooyinku dhacaan, waa inaanu canaanan nafteena si aad u niyad jab ah si aan ugu dhaqaaqno. Waa inaan u qaadannaa ciladaha cashar ahaan oo aan wax ka barannaa. Waxay naga caawineysaa inaan sida ugu habboon wax uga qabanno oo ula macaamilno xaaladaha mustaqbalka qaab wanaagsan.
Xigashooyinka ku saabsan Wadnaha iyo Maskaxda
Erayada ku saabsan guusha
Erayada ku saabsan Guusha iyo Guuldareysiga
Ha ballanqaadin markaad faraxsan tahay. Ha ku jawaabin markaad xanaaqsan tahay. Go'aanna ka gaadhin goortaad murugaysan tahay. - Siad K. Abdelnour
Ha ballanqaadin markaad faraxsan tahay. Ha ku jawaabin markaad xanaaqsan tahay. Go'aanna ka gaadhin goortaad murugaysan tahay. - Siad…
Bulshada ayaa kuu xukumi doonta sikastaba, sidaa yeel wax alla wixii aad rabto inaad sameyso. - Siad K. Abdelnour
Bulshada ayaa kuu xukumi doonta sikastaba, sidaa yeel wixii aad rabto inaad sameyso. - Siad K. Abdelnour…
Ku alla kii doonaya inuu ku dejiyo, horaa kuu kaa hooseeya. - Siad K. Abdelnour
Waxaad ka heli doontaa dad badan oo noloshaada ah kuwaasoo kugu sii wadi doona inay kuu xukumaan wax walba…
Raadi xushmad, ma fiirsan. Way sii dheertahay. - Siad K. Abdelnour
Waxaa muhiim ah in la fahmo in qofku uusan ku gaari karin meelaha sare meelaha nolosha kaliya la soo jiito ee astaamaha soo jiidashada ama…